အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – မြန်မာနုိုင်ငံကုို ဦးဆောင်ထုိုက်သူ | MoeMaKa Burmese News & Media
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ)၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၄
နုိုင်ငံရေးကုို ဆွေးနွေးရေးသားတယ် ဆုိုသော်လည်း မိမိအနေနဲ့ကတော့ ဗုဒ္ဓဓမ္မရှုထောင့်မှလည်းပဲ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကုို စဉ်းစားသုံးသပ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဓမ္မဆုိုတာ ဗုဒ္ဓက ရော်ရမ်းမှန်းဆပြီး အထင်အမြင်ကုို ဟောကြားထားခြင်းမဟုတ်သလုို ဗုဒ္ဓရဲ့ တီထွင်ဖန်တီး ဟောကြားထားမှုလည်း မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဓမ္မဆုိုတာ သဘာဝအရှိတရားကုို ဥာဏ်တော်နဲ့ ထုိုးထွင်းသိမြင်ပြီး ဟောကြားထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့ အရှိတရား သဘာဝဓမ္မဆုိုတာ ဗုဒ္ဓပွင့်သည်ဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓမပွင့်သည်ဖြစ်စေ လောကမှာ ရှိနှင့်ပြီးသား အမှန်တရားပါ။ ဗုဒ္ဓဓမ္မဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကုို ကုိုးကွယ်ယုံကြည်သူနဲ့သာ သက်ဆုိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဓမ္မဟာ လူမျိုးတစ်မျိုး ဘာသာတစ်ခုဆုိုတဲ့ ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းထဲမှာ တည်နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဓမ္မကုို နားလည်သူဖြစ်စေ၊ ဓမ္မကုို နားမလည်သူဖြစ်စေ၊ မည်သူအတွက်မဆုို ဓမ္မဟာ ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတုိုင်းသာ သွားပါတယ်။ တရားဓမ္မဆုိုတာ မျက်နှာမလုိုက်ပါ။
ဓမ္မလမ်းကြောင်းကုို ဆန့်ကျင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆုိုးကျိုးတွေ၊ ဓမ္မလမ်းကြောင်းကုို လုိုက်နာမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာမယ့် ကောင်းကျိုးတွေကုို ဗုဒ္ဓကုိုယ်တော်တုိုင်လည်း တွန်းလှန်ဖယ်ရှား ဟန့်တား၍ မရနုိုင်ပါ။
ဓမ္မလမ်းကြောင်းကုို ဆန့်ကျင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆုိုးကျိုးတွေကုို ဘယ်တန်ခုိုးရှင်မှလည်း မကာကွယ်နုိုင်သလုို ဘယ်ယတြာနဲ့မျှလည်း မန်းမှုတ်တားဆီးမပေးနုိုင်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ကမ္မဝါဒဆုိုတာ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ပေါ်ပုံကုို ထုတ်ဖေါ်ဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့ သဘာဝနိယာမတရား ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့သာသနာပြုဖြစ်တော်မူသော ဘဒ္ဒန္တသေဋ္ဌိလ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကမ္မဝါဒဖွင့်ဆုိုချက်ထဲမှ တချို့ကုို ထုတ်နှုတ်ပြပါရစေ။
Kamma is neither fatalism noradoctrine of predetermination. The past influences the present but does not dominate it, for Kamma is past as well as present. The past and the present influence the future. The past isabackground against which life goes on from moment to moment. The future is yet to be. Only present moment exists and the responsibility of using the present moment for good or for ill lies with each individual.
ပြုလုပ်မှု ကံ ဆုိုတဲ့ ကမ္မဝါဒဟာ တရားသေဝါဒ (ဧကန်မုချ) မဟုတ်သလုို ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်စီမံထားမှုဝါဒလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အတိတ်က ပြုလုပ်ခဲ့မှုဟာ ပစ္စုပ္ဗန်ကုို လွှမ်းမုိုးမှုရှိသော်လည်း စုိုးမုိုးချယ်လှယ်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ့်ကြောင့်ဆုိုသော် ကံဆုိုတာ အတိတ်ကံရော ပစ္စပ္ဗန်ကံပါ ပါဝင်နေလို့ပါ။ အတိတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ဗန်မှာ ပြုလုပ်မှုတွေဟာ အနာဂတ်ကုို လွှမ်းမုိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ယခု ရရှိထားတဲ့ ဘဝရဲ့ ခဏတုိုင်း ခဏတုိုင်းဟာ အတိတ်နောက်ခံ အကြောင်းတရားအပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ ကံရဲ့ အနာဂတ်အကျိုးတရားက ရောက်မလာသေးပေမယ့် ယခု ပစ္စုပ္ဗန်ကံကတော့ ကုိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ပစ္စုပ္ဗန်ကံကုို ကောင်းစွာ အသုံးချမလား လွဲမှားဆုိုးရွားစွာ အသုံးချမလားဆုိုတာ ကုိုယ့်ရဲ့ တာဝန်သာ ဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးစီချင်းရဲ့ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။
လူနှစ်သိန်းနီးပါး အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ နာဂစ်မုန်တုိုင်းဒဏ်ခံ ထောင်ပေါင်များစွာသော ပြည်သူလူထုကြီးကုို အကူအညီပေးဖုို့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရောက်လာကြသူတွေမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံမှ စေတနာရှင်များ ပါဝင်ကြပါတယ်။
ဒုက္ခသည်များကုို အကူအညီပေးဖုို့ ရောက်လာကြတဲ့ အလှူရှင်တွေကုို ဟန့်တားပိတ်ပင်သူတွေ၊ ဒုက္ခသည်များအတွက် လှူဒါန်းပေးပုို့လာကြတဲ့ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေကုို ကြားမှ ခုိုးယူရောင်းစား အလွဲသုံးစားလုပ်ကြသူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီပဲယင်း၊ လက်ပံတောင်းတောင်၊ ရွှေဝါရောင်၊ ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ ယခု လောလောလတ်လတ် မဟာသန္တိသုခကျောင်းကိစ္စ စသည် စသည် အရေးအခင်းအားလုံးမှာ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် သတ်ဖြက်မှုတွေကုို ကုိုယ်တုိုင်ကျူးလွန်သူတွေနဲ့ အမိန့်ပေးစေခုိုင်းသူတွေအားလုံးဟာ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရင်း အသက်ပေးသွားခဲ့ကြသူ အာဇာနည် (၉) ယောက်ထဲမှ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နဲ့ ရဲဘော်ကုိုထွေးတုို့ဟာ မူစလင်တွေပါ။
ဓမ္မပဒ၊ မိလိန္ဒပဥှာ၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ စသည့် ဗုဒ္ဓဓမ္မ ကျမ်းစာပေါင်းများစွာကုို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသုို့ ပြန်ဆုိုရေးသားခဲ့သူ စာပေပညာရှင် ပါမောက္ခ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်ဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပါ။
ဗုဒ္ဓဖြစ်လာခဲ့တဲ့ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမသည်ပင် မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ပါ။ လူအများ အခေါ်အဝေါ်နဲ့သာ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်း ရမယ်ဆုိုရင်တော့ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမဟာ ကုလားလူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကုို လေ့လာအကဲဖြတ်ရာမှာ သူ့ရဲ့ မျိုးရုိုးနဲ့ သူယုံကြည်ကုိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတစ်ခုတည်းကုို ကြည့်လုို့ မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ သူ့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားသာ ပဓာန ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိအနေနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အလွန်မှာ အဖက်ဖက်မှာ ယုိုယွင်းကျဆင်းနေတဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံကုို ဦးဆောင်ထုိုက်သူ သမ္မတကုို သူ့ရဲ့ အရည်အချင်း၊ သူ့ရဲ့ စိတ်ကောင်းစေတနာ၊ သူ့ရဲ့ ရုိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ သူ့ရဲ့ ကုိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ် အနစ်အနာခံမှုနဲ့ လူထုလေးစာယုံကြည်မှု စံတွေနဲ့သာ တုိုင်းတာပါတယ်။ ထုိုစံတွေနဲ့ အပြည့်စုံဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကုို ပြပါဆုိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုိုသာ ပြရပါလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် သာလွန်သူ တခြားမည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကုိုမျှ မမြင်ပါ။
မိမိဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုို အပြင်မှာ တစ်ခါမျှ မမြင်ဖူးသလုို NLD မှ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့မျှလည်း မခင်မင်ပါ။ သုို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သန့်ရှင်းဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကုို ဓမ္မအသိနဲ့ ယှဉ်ပြီး နားလည်သိမြင်ထားပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဗြိတိသျှထံမှ လွတ်လပ်ရေး ရလာခဲ့သော်လည်း နစ်နာဆုံးရှုံးမှု အကြိမ်ကြိမ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ယခုတစ်ကြိမ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ တုိုင်းပြည်ကုို ဦးဆောင်ခွင့် မရခဲ့ပါက ပြည်သူလူထုအတွက် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အတုိုင်းအတာကြီးမားသော နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့လုိုက်ရပြန်ပြီလုို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။
(ပန်းချီကား – ပန်းချီ မမွှေး၊ ဒေါ်စု ၆၉ နှစ် အထိမ်းအမှတ်၊ ပန်းချီမမွှေးဖေ့စ်ဘွတ်က ယူပါတယ်)
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စ်ိန်တောရ) – ဟော်လန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ကျင့်စဉ် (0)
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – အုပ်စု နှစ်ခု (2)
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – အကယ်၍သာ (3)
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – မဟာသန္တိသုခကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလုိုမြင်တယ် (1)
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – သေရာညောင်စောင်း လျောင်းစက်ရာဝယ် (0)
2 Responses to အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – မြန်မာနုိုင်ငံကုို ဦးဆောင်ထုိုက်သူ
Thet Naing on June 15, 2014 at 7:38 am
မှန်လှပါတယ်ဘုရား။ လောကဓမ္မဟာ အစဉ်အမြဲရှိနေတဲ့ တရားပါ။ လောကသုံးပါးလုံးကို လွှမ်းခြုံရုံမက ဘုရားမပွင့်တဲ့ သုညကမ္ဘာပါမကျန် နယ်နိမိတ်အားလုံးကိုပါ လွှမ်းခြုံပါတယ်။ ကိုယ့်အမျိုးကိုယ် သိပ်ချစ်လွန်းနေရင်လည်း အခုလက်ရှိမှာ ဘာသာမဲ့အဖြစ်နဲ့နေ။ ကိုယ့်လူမျိုးထဲက ဘုရားဖြစ်တဲ့အထိ စောင့်ပြီးမှ ကိုးကွယ်ပါလားလို့ တပည့်တော်ရဲ့ညီ မဘသဘုန်းကြီး(ဓမ္မစရိယအောင်)ကို ပြောဘူးလိုက်ပါတယ်ဘုရား။ စာဘယ်လောက်တတ်တတ်၊ ဘာဘွဲ့တွေ ဘယ်လောက်ရရ(ဒါတွေကို အလကားပါလို့ ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါ) ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ပြောနေတယ်၊ ရေးနေတယ်၊ လုပ်နေတယ်၊ တွေးနေတာတွေကို အပ္ပမာဒတရား(သတိ)နဲ့ ပြန်ကြည့်နေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုံးဝညာလို့ မရပါဘူးဘုရား။ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်မှု၊ ၊ နှုတ်မှု ၊ စိတ်မှု တွေကသာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအစစ်အမှန် သို့မဟုတ် ဒီဂရီအနည်းအများကို ဖေါ်ပြနေတာပါဘုရား။ ဓမ္မကို ဂဃနဏနားလည်လာအောင် အမြဲသင်ကြားပို့ချပေးပါ အရှင်ဘုရာ။
naing win on June 16, 2014 at 1:14 pm
yes, very good i believe like that, thanks